Haweeney Somali oo ku xiraneyd dalka New Zealand ilaa 2008-dii oo ku hanjabtay inay mar kale afduubi doonto Diyaarad.
Caasha Cali Cabdulle oo 42-jir ah ayaa hadalkaasi ka sheegtay Isbitaal lagu hayo Dadka dhimirka la’ oo ay ku xiran tahay, kadib markii lagu helay inay bishii February ee sannadkii 2008-dii tooreey ku dhaawacday Duuliye iyo rakaab la socday Diyaarad isaga kala gooshaysay gudaha dalkaasi.
Haweeneydaasi oo xukunkeeda 9-ka sanno u dhamaan doono bisha soo socota ee February 9-da ayaa ku hanjabtay inay mar kale afduubi doono Diyaarad, haddii ay fursad u hesho.
Haweeneydaasi waxay 9-sanno ka hor Tooreey ku weerartay Diyaarad ay la socderen 19-qof oo ay leedahay Shirkadda Air New Zealand, waxayna dhaawacday 2-duuliye iyo qof rakaab ah, ka hor intaan Diyaaradda lagu khasbin inay si degdeg ah u caga-dhigato Garoonka.
Haweeneydaasi oo haatan lagu hayo Xarun lagu daaweeyo dadka dhimirka oo ku taalla Caasimadda dalka New Zealand ee Wellington ayaa diiday inay ka qeyb gasho Dhegeysigii ugu dambeeyey ee Guddiga Cafiska ee dalkaasi.
Qoraal kooban oo laga diyaariyey Dhegeysigaasi oo ay baahisay Idaacadda Radio New Zealand (RNZ) ayaa lagu sheegay inay Guddiga Cafiska u aqoonsadeen Caasha Cali Cabdulle inay weli tahay Qof Khatar Sare leh, isla markaana ay sheegtay inay isku dayi doonto sidii ay u afduubi lahayd Diyaarad kale iyo inay ku hanjabtay inay dab is-qabadsiin doonto.
Go’aanka ayaa lagu xusay in laga shaqeyn doono qaabka ugu wanaagsan ee loo maarayn doono Mustaqbalk Haweeneydaasi.
Waxaana suurto-gal ah in marka ay dhamaysato Xabsigeeda bisha soo socoto in loo wareejin doono Nidaamka Caafimaadka Maskaxda, si ay daaweyn kale u hesho, lamana sheegin xilliga si toos ah loo sii dayn doono.